Andro: 10 Novambra 2019
Ora amin'ny fiaran-dalamby any Ankara Istanbul: Ireo lamasinina haingam-pandeha ambony làlana dia niditra teo amin'ny fiainantsika, ka mora kokoa sy mahafinaritra kokoa ny fitsangatsanganana. Ny TCDD Transportation dia nanao ny fanavaozana rehetra sy ny teknolojia [More ...]
Istanbul Metrobus Ora: Amin'ity vaovao ity momba ny fotoana nijanonan'i Metrobus dia afaka mahita ny sarintany metrobus koa ianao, izay fijanonan'ny metrobus akaiky indrindra amin'ny alehanao sy ny fijanonan'ny metrobus amin'ny lalana alehanao. [More ...]
Istanbul Metro Hours 2019: Tamin'ny faran'ny 2030, miaraka amin'ny fanamboaran-dalana manomboka amin'ny taona ho avy, ny 776 no metro lava roa eto ambonin'ny tany aorian'ny fanorenan'i New York. [More ...]
Lalana sy haingam-pandeha ambony lalana misy lalana: Ny sidina Edirne, Tekirdag sy Kirklareli dia hifandray amin'ny tetikasan'ny Istanbul 'High Speed ​​Train'. Istanbul Halkalı kilometatra miala ny Station Station Edirne Kapıkule [More ...]
Ny tetezana ambanin'ny tany Golden Horn, izay ahitana ny sambo an-tsambo, dia tetezana fampiatoana miorina eo ambonin'ny Golden Horn any Istanbul, izay mamela ny fandalovan'ny tsipika Şişhane Yenikapı Metro. Fananganana 2 [More ...]
Ny olan'ny lozam-pifamoivoizana sy ny vahaolana i Van no nalaina
Ny olan'ny lozam-pifamoivoizana sy ny vahaolana i Van no nalaina; Ny fivorian'i Van Metropolitan, ny Fitaterana ary ny Coordination Center (UKOME) dia natao natao. Fihaonana nokarakarain'ny departemantan'ny fitaterana, Governemanta Distrika Edremit sy ny monisipaly Van Metropolitan [More ...]
2020 ho taona feno fampanjariam-bola any Bursa
2020 Year dia feno fampiasam-bola feno ao Bursa; Ny ben'ny tanàna Bursa Alinur Aktaş, ny minisitry ny tontolo iainana sy ny fanajariana ny tanàn-dehibe Murat Kurum dia nanombatombana ny vaovao tsara ho an'i Bursa ary [More ...]
Malalaka ve ny fitaterana olona 10 Novambra
81 ny fahaverezan'ny mpitarika lehibe. Amin'izany fotoana mbola faniriana rehetra ho an'ny Ata Torkia. Moa ve ny 10 fitaterana olona malalaka amin'ny volana novambra? Bus, metrobus, metro ary marmaray maimaimpoana? Famantaranandro 10 Novambra 1938 [More ...]
Androany tao amin'ny tantara 10 Novambra 1923 Nisy fifanarahana natao teo anelanelan'ny Huguenin sy Nafia, Mukhtar, ny lalamby Anatoliana.